Serivisy fikarohana momba ny Hashtags & Profile
Mividiana mpanaraka Instagram mandeha ho azy
Vidio amin'ny Video Video
Mividy Facebook Followers
Vidio ny Facebook Fan Page
Ny fomba hendry indrindra ahazoana mpanaraka sy sitraka Instagram maimaim-poana!
TurboMedia.io no vahaolana mora sy mahomby hahazoanao mpanaraka Instagram sy kalitao avo lenta ary azo antoka! Safidy maimaimpoana maimaimpoana sy maimaim-poana no azo atao mifanaraka amin'ny filanao fitomboana tsirairay.
Makà mpanaraka sy tianao Instagram maimaimpoana
Mora ny mahazo mpanaraka sy tiako Instagram maimaim-poana!
Araho ny torolalana tsotra
Vita tao anatin'ny 30 ka hatramin'ny 60 segondra!
Nahoana no Mampiasa TurboMedia.io?
TurboMedia.io dia manolotra tamba-jotra vaovao izay ahafahanao mandray haingana sy mora 10 mpanaraka Instagram maimaim-poana ary 10 tiany Instagram maimaim-poana isaky ny 48 ora! Misy ny drafitra karamaina, saingy ny drafitra maimaimpoana dia tena mandaitra amin'ny fampitomboana ny mombamomba anao. Tsy mila tenimiafina ianao, mitazona ny mombamomba anao Instagram azo antoka sy azo antoka.
TurboMedia.io dia noforonina mba ho tsotra araka izay tratry ny olombelona! Zava-dehibe ny fotoanao ary azonay tsara izany. Mba hahazoana mpanaraka sy tiana maimaimpoana dia fenoy fotsiny ny fanadihadiana na hetsika sosialy 5 ao anatin'ny 30 ka hatramin'ny 60 segondra dia vita ianao! Saika ho azonao eo noho eo ny serivisy nampiasanao anao ary azonao averina isaky ny 48 ora ny fizotrany.
Rehefa mampihetsika drafitra maimaimpoana na karama ianao, dia ho hitanao ny mpanaraka anao sy ny tianao manomboka mihombo avy hatrany. Ataovy amin'ny tanana ny drafitra maimaim-poana isaky ny 48 ora na mampihetsika drafitra karama mandeha ho azy 100%. Ataovy mavitrika ny drafi-bola ary mandray automatique mpanaraka isan-kerinandro sy tianao isaky ny lahatsoratra vaovao ataonao ao anatin'ny minitra vitsy!
Safidy malalaka sy karama
15 Mpanaraka ($ 20.00) 30 Mpanaraka ($ 40.00) 60 Mpanaraka ($ 80.00)
Mahazoa mpanaraka 15 isan'andro
Mampita isaky ny 48 ora
Mampifamadika ny 1x isaky ny 48 ora
Sitraka (25 dolara) Sitraka (50 dolara) Sitraka (100 dolara) Sitraka (200 dolara) Sitraka (500 dolara) Sitraka (1000 dolara)
Mahazoa Tiana 25 isaky ny paositra
Makà mpanaraka Instagram maimaim-poana: Ianaro izay atolotra ho anao
Tamin'ny Janoary 2020, nitatitra mpampiasa Instagram efa ho lavitrisa isam-bolana ny Instagram Tongava ny volana Janoary 2021, io isa io dia tsy maintsy hiakatra amina toerana marobe ary ity fampitomboana haingana ireo mpampiasa Instagram ity dia mampiseho fotsiny ny halaviran'ny sehatra. Androany, ny Instagram dia milina ahazoam-bola lehibe ho an'ny orinasa sy ny influencers amin'ny media sosialy, izany no antony lehibe kokoa noho ny sehatra media sosialy. Etsy ankilany, kariera ho an'ny maro izy io. Ny marika manana ny lazany indrindra sy ny fitaomana ny haino aman-jery sosialy dia mahazo olona an-tapitrisany isaky ny lahatsoratra, koa maninona ianao no ajanona eo? Alohan'ny hanombohanao mitady vola tena izy avy amin'ny Instagram dia mila miasa mafy ianao hamboly ny sarinao eo amin'ny lampihazo. Misy lafin-javatra vitsivitsy izay mamaritra ny hafainganana sy ny vola ho azonao amin'ny alàlan'ny Instagram. Anisan'izany ny hoe iza ianao, ny soatoavina ilazan'ny marika anao, ny zavatra hatolotrao, ary ny isan'ny olona matoky anao ary hitady vahaolana aminao. Ny fametrahana ny mombamomba ny marika sy ny fiantohana ny kalitaon'ny vokatra sy / na ny serivisy no andraikitrao lehibe. Saingy, misy fomba fampitomboana haingana ny isan'ireo mpanaraka anao. Ny safidy ahazoana mpanaraka Instagram maimaim-poana sy ny safidy hafa aloa dia afaka manome anao lohany amin'ireo mpifaninana aminao. Izany dia mikasika ny fanatonana ireo mpihaino kendrenao ary hahatonga fahatsapana maharitra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hojerentsika akaiky ny fomba ahafahan'ny fananana mpanaraka Insta bebe kokoa miasa hahagaga anao. Ka, raha tsy misy resaka lavitra intsony, andao hiditra ao!
Ny tombony azo amin'ny fananana mpanaraka bebe kokoa amin'ny Instagram
Ao amin'ny Instagram, ny ezaka no fitaovana ary ny vola no farany. Saingy, ho tonga any ianao rehefa manana mpanaraka Instagram bebe kokoa. Ireto misy tombontsoa mahavariana ho hitanao rehefa miakatra hatrany hatrany ny isan'ny mpanaraka anao.
Mpandray anjara bebe kokoa amin'ny vokatrao: Tsy hiteraka resabe loatra ny zavatra atolotrao raha tsy tonga any amin'ny olona maro eo amin'ireo mpihaino kendrenao. Miaraka amin'ny mpanaraka bebe kokoa, dia hanana olona tsy mitsaha-mitombo ianao izay tsy hizara ny atiny fotsiny fa hividy ny vokatrao ihany koa. Ny sasany amin'ireo niches Instagram mahasoa indrindra dia ahitana fitsangatsanganana sy fizahan-tany, hatsaran-tarehy, fahasalamana sy fahasalamana, lamaody, fitaizana, fomba fiaina, orinasa, sakafo, sary, ary mozika. Raiso ohatra i Jane Selter. Miaraka amin'ny mpanaraka Instagram maherin'ny 12 tapitrisa, ny maodely ara-batana dia olo-malaza ao amin'ny Instagram amin'ny fampiroboroboana ny fanatanjahan-tena, ny fahasalamana ary ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Jane no ohatra tonga lafatra amin'ny olona iray izay tia zavatra iray (raha ny momba azy, ara-batana). Mampiasa ny fotoanany koa izy mba hizarana izany amin’ireo olona mitovy saina maneran-tany. Sarotra ny maka sary an-tsaina fa ny iray amin'ireo modely ara-batana malaza indrindra ao amin'ny Instagram dia niharan'ny herisetra noho ny bika aman'endriny. Ankehitriny, i Selter dia mahazo tombony be avy amin'ny fandaharam-panatanjahantena karamany ary koa amin'ny alàlan'ny Instagram, izay tsy mitsahatra manampy ny mpanaraka azy isan'andro.
Azonao atao ny misongadina ao amin'ny pejin'ny Explore Insta: Rehefa manao anarana ho an'ny tenanao ao amin'ny akaninao ianao ary manana mpanaraka mendrika dia mety hiseho ao amin'ny pejin'ny Explore Instagram ny lahatsoratrao. Mampiasa ny teny hoe 'mety-ampy' izahay satria tsy misy fitsipika sarotra sy haingana momba ny isan'ny mpanaraka tokony ho hita ao amin'ny Instagram Explore. Ny pejy Explore an'ny Instagram dia nohavaozina tamin'ny Mey 2019 ary ankehitriny dia misy bara fitetezana ahafahan'ny mpampiasa misafidy ny karazana atiny tiany hojerena. Ny safidy dia ahitana ny IGTV, izay sehatra manokana an'ny Insta hijerena horonan-tsary maharitra (lahatsary iray minitra miampy), ary Shop – ny sehatra fiantsenana Instagram. niches izay mahaliana azy ireo. Ohatra, raha ny kaontinao Instagram momba ny sakafo dia mety ho hita ao amin'ny pejy Explore an'ny mpampiasa iray izay mitady votoaty mifandraika amin'ny sakafo. Ny hoe asongadina ao amin'ny Instagram Explore dia afaka mampifandray ny fantsonao amin'ireo mpampiasa izay mety tsy nahalala akory ny fisianao sy izay natolotrao. Ny Instagram izao dia mamela ny marika hividy doka ao amin'ny Explore. Na dia tsy aseho ao amin'ny fahana Explore aza ny doka novidina, dia afaka mampitombo ny mety hahitanao ny marikao.
Ampitomboy ny fifamoivoizana amin'ny tranokala: Raha miasa amin'ny tranokalany ofisialy ny marikao, dia mila mampiasa Instagram ho sehatra hivarotra ny tranokalanao ianao. Hahita bilaogy sy lahatsoratra maro ao amin'ny Internet ianao izay manoro hevitra ny hanao dingana mora vitsivitsy. Anisan'izany ny fampidirana ny rohy mankany amin'ny tranokalan'ny orinasanao ao amin'ny bio Instagram anao ary amin'ny sary sy horonan-tsary rehetra navoakanao. Na izany aza, raha tsy manana mpanaraka ampy ianao, dia tsy afaka manantena ny Instagram ho sehatra hampifandray ny tranokalanao amin'ny mpihaino kendrena anao. misoratra anarana amin'ny serivisy ahafahanao mahazo mpanaraka Instagram maimaimpoana. Satria mihabetsaka ny isan'ny mpanaraka anao, dia hiakatra koa ny isan'ny mpitsidika amin'ny tranokala ofisialin'ny marikao.Na dia tsy antoka aza ny fitomboan'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala fa hividy ny zavatra amidinao ny olona, ​​​​dia hanome fahitana tena ilaina tokoa ny tranokalanao. Raha manao ezaka ampy ianao mba hahazoana antoka fa ny tranokalanao dia maotera fikarohana amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo teny fanalahidy mety amin'ny ankapobeny, ny valiny mitambatra dia mety ho tsara. Hihatsara ny laharan'ny milina fikarohana ao amin'ny tranokalanao, ka hahatonga ny marikao ho hita kokoa tsy amin'ny Instagram ihany, fa amin'ny sehatra toy ny Google, Yahoo, ary Bing koa.
Mitadiava saina bebe kokoa amin'ny YouTube: YouTube no sehatra media sosialy miorina amin'ny horonan-tsary lehibe indrindra eran-tany ary raha YouTuber maniry ianao dia tsy afaka manao ny zavatrao fotsiny amin'ny YouTube. Tazony ihany koa ny mombamomba ny Instagram ary tsarovy ny hampiasa azy io mavitrika. Tahaka ny ataonao amin'ny tranokala iray, apetaho ao amin'ny bio Insta anao ny rohy fantsona YouTube anao ary tohizo hatrany ny fanavaozana ny rohy mankany amin'ny horonan-tsary YouTube navoakanao vao haingana indrindra. nampahafantarina anao tao amin'ny Instagram. Ny fampidirana ny antsipirian'ny horonan-tsary sy fantsona YouTube anao ao amin'ny bio Instagram anao dia hamporisika ireo mpanaraka Instagram efa misy hiditra ao amin'ny fantsona YouTube anao. Raha tian'izy ireo ny zavatra hitany dia hanana mpanjifa sy fijerena bebe kokoa ao amin'ny YouTube ianao, izay hampitombo be ny fahafahanao ho lasa YouTuber amin'ny fotoana feno. Alaivo sary an-tsaina hoe mahazo vola be dia be avy amin'ny YouTube sy Instagram. Toa manasa, sa tsy izany?
Miara-miasa amin'ny marika hafa ary mijinja ny valisoa: Rehefa manomboka mahazo fahitana amin'ny Instagram ianao, dia maniry ny hiara-hiasa aminao ireo marika sy mpamorona votoaty hafa miasa ao amin'ny niche anao. Amin'izao fotoana izao, ny fiaraha-miasa no resahina ary tsy dia misy loatra ny momba ny fifaninanana amin'ny media sosialy, ary miasa izany. Inona no ilana ny fanambaniana olon-kafa rehefa afaka miara-miasa ny orinasa/olona roa ary mifamelona ny zava-bita sy ny fahombiazan'ny tsirairay? Mahita vloggers fitsangatsanganana miara-miasa amin'ireo mpitoraka bilaogy fitsangatsanganana, ary koa mpitendry mozika sy mpanakanto miara-miasa. Tsy isalasalana fa nanokatra varavarana maro ny Instagram. Tsy maintsy manandratra ny lalaonao manokana ianao ary mifantoka amin'ny famoahana votoaty izay misarika ny sain'ny mpihaino anao. Raha vantany vao manana mpanaraka ara-drariny ianao dia afaka manatona marika hafa ho an'ny fiaraha-miasa. Na dia tsy ekena aza ny fangatahana fiaraha-miasa rehetra, ny sasany dia handalo ary raha voasintona tsara, dia afaka manosika ny isan'ny mpanaraka anao ho ambony kokoa. Rehefa mahatratra ny haavon'ny 'mpanentana media sosialy' ianao dia afaka manantena ny fangatahana fiaraha-miasa avy amin'ny marika hafa sy ny mpamorona votoaty, ary hitohy ny tsingerin'ny. dia mifameno amin'ny niche anao. Ohatra, raha mpitendry mozika ianao ary mahavita mahazo ny satan'ny 'influencer' ao amin'ny Instagram, dia azonao atao ny manatona ireo marika manamboatra sy mivarotra vokatra lalaovinao. Ny mpitendry gitara dia afaka miara-miasa amin'ny mpanamboatra gitara sy/na ampli, ny mpihira dia afaka miara-miasa amin'ny orinasa mpamokatra mikrô, sy ny sisa.
Instagram dia manasongadina ny fampiroboroboana ny marikao
Raha vantany vao manomboka mahatsikaritra ny pejinao Instagram ary mahazo mpanaraka bebe kokoa ianao, dia azonao atao ny manararaotra ireo endrika marketing tsy manam-paharoa Instagram hahitana mpanaraka Instagram bebe kokoa. Na dia tsy voatery hampiasa ireo endri-javatra rehetra ireo aza misalasala mifangaro sy mifangaro. Amin'izany no ahafahanao manararaotra ny ankamaroan'ny fitaovana ao anatiny ao Insta hanamafisana ny tratran'ny marikao. Ankoatra ny fizarana fizarana sary tsy tapaka, i Instagram dia mirehareha amin'ireto fiasa manaraka ireto.
Nifanakalo hevitra momba ny IGTV izahay taloha, saingy sehatra video maharitra izany. Ny fampiharana Instagram default dia mamela ny famoahana horonan-tsary fohy ihany. Ankoatry ny fampidinana horonan-tsary fohy endrika fohy, ireo endri-javatra roa hafa atolotry ny sehatra dia ahitana horonan-tsary sy tantara mivantana. Ny fampisehoana an-tsary mivantana dia ahafahan'ny marika manangana ny fahamendrehana sy ny mangarahara amin'ny marika - zavatra lasa sarobidy kokoa isan'andro. Izany dia vokatry ny fifaninanana tsy mitsaha-mitombo manerana ny niches. Fomba tsara hampiarahan'ny mpanaraka anao anao amin'ny fotoana tena izy koa. Isaky ny manomboka mandefa horonantsary mivantana ianao dia ampandrenesina ireo mpanaraka anao. Vao haingana ny sehatra no nanatsara ny fahaizany mihetsika mivantana ary ankehitriny, mpampiasa roa afaka misongadina amin'ny horonantsary mivantana avy amin'ny fitaovana roa misaraka. Manomboka amin'ny resadresaka mivantana mankany amin'ny famoahana vokatra mivantana ka hatramin'ny fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy, tsy misy farany ny azo atao. Raha sitrakao ny algorithm amn'ny Instagram, dia mety hahatonga azy amin'ilay horonantsary "Top Live" ao amin'ny pejin'ny Instagram Discover ihany koa ny horonantsary mivantana anao. Raha izany no izy, dia mety ho hitan'ny mpampiasa Insta erak'izao tontolo izao ny horonan-tsarinao, manatsara tanteraka ny isan'ny isan'ny mpanaraka. Misy ihany koa ny seho 'Tantara' izay mamela ny fijerena sary 10-segondra sy ny fijerena horonantsary 15-segondra. Izy io dia fiasa mahafinaritra izay nampiasain'ny marika sy ny influencer hampivoarana ny mpanaraka azy momba ny vokatra farany, serivisy ary / na atiny navoaka. Instagram dia nahafahana nanisy fametahana vokatra tao anatin'ny fisehoana 'Stories', izay midika fa raha mampiseho vokatra amidinao amin'ny iray amin'ireo 'Tantara' azonao atao dia asio marika. Ireo mpanaraka izay liana amin'ny fividianana azy dia afaka manindry ny marika momba ny vokatra ary mividy azy amin'ny tranokalanao.
Doka ao amin'ny Instagram
Ankoatra ny fizarana sary sy horonan-tsary dia azonao atao ihany koa ny mandefa doka hampiroborobo ny zavatra atolotrao amin'ny Instagram. Misy karazan-javatra samihafa azonao andramana raha te hahita ny karazana doka mety hihazakazahana ho an'ny marikao. Azonao atao aza ny mampiasa ny atiny efa misy ao amin'ny pejinao ary manova azy ireo ho doka miaraka amin'ny endri-doka Instagram Ads. Mba hamoronana sy fitantanana doka amin'ny Instagram dia mila mampiasa ny Ad Manager Facebook ianao satria fampiharana an'ny Facebook ny Instagram.
Ireo mpampiasa Instagram dia afaka mamela fampandrenesana fanindriana, izay hampandre azy ireo rehefa mampakatra sary, horonan-tsary sns sns ireo pejy arahin'izy ireo. Mba hampiasa an'ity endri-javatra ity dia mila mamporisika ireo mpanaraka anao ianao mba handray andraikitra. Manerana ny hafatrao rehetra, ampidiro ny antso-to-hetsika, lazao ny mpanaraka anao mba hahafahany mampandeha fampandrenesana ny fantsonao. Na dia tsy hamaly ny antsonao aza ny mpanaraka anao dia hisy ny. Raha tian'izy ireo ny zavatra navoakanao dia zarain'izy ireo amin'ny namany sy mpanaraka azy izany. Ny fampandrenesana manosika dia mety tsy ny safidinao tsara indrindra amin'ny resaka fahazoana misimisy kokoa amin'ny Instagram, saingy mety ho fanampiana tsara izany. Famaranana Fantatrao izao fa afaka mahasoa anao sy ny sasany amin'ireo endrika marketing matanjaka indrindra ao amin'ny Insta ny mpanaraka Instagram bebe kokoa. Manaraka izany dia tokony manapa-kevitra amin'ny fomba tianao hahatongavana mpanaraka maro ianao. Eny, amin'ny lafiny rehetra, azonao atao ny mandray ny làlana biolojika ary miandry ny olona hifandray amin'ny atiny alohan'ny hamelezana ny bokotra 'Manaraka'. Na izany aza, mandany fotoana ary raha te-handanjalanja ny haavon'ny fahombiazan'ny Instagram ianao dia mety ho tsara kokoa ny mifidy lalana hafa. Amin'ny fisoratana anarana ho an'ny programa izay mampiakatra haingana ny fahitana Instagram, dia afaka mahazo mpanaraka Instagram maimaimpoana sy mankafy haingana ianao. Ireo programa dia efa nandoa kinova natolotra ihany koa. Na dia hitondra valiny haingana kokoa aza ireo karama, dia afaka mahavita be ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo kinova maimaimpoana koa. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny programa toy izany dia ny tsy fisian'ny bot bots. Ka, ireo mpanaraka vaovao rehetra azonao dia tena mpampiasa Instagram. Ka maninona raha misoratra anarana amin'ny programa toy izany ary avelao ny marikao hanana fiantraikany lehibe kokoa noho ny taloha teo amin'ny Internet?
Manompoa mpampiasa 500,000+ mpampiasa
Zahao ny hevitry ny mpampiasa TurboMedia sy ny zavatra niainany
TurboMedia dia nandefa ny pejinay Instagram haingana noho ny olona rehetra!
Manome serivisy ambony kalitao avo indrindra amin'ny Internet izy ireo.
Nampiasa TurboMedia nandritra ny 2 taona aho ary nahazo fitomboana bebe kokoa noho ny naloako! Misaotra ry zalahy.
Mampiasa horonan-tsary TikTok ho an'ny Tantara & Reels Instagram: Ahoana no hanaovana izany
TikTok dia heverina ho iray amin'ireo fampiharana horonantsary fohy malaza indrindra eran'izao tontolo izao ankehitriny. Voalaza fa nampiasain’ny...
Maninona no manampy anao hisarihana mpanaraka bebe kokoa ny fanapahana ny lisitry ny “manaraka” anao?
Na dia toa mifanohitra aza izany, dia afaka mahazo mpanaraka Instagram bebe kokoa ianao amin'ny alàlan'ny tsy fanarahana ao amin'ny Instagram izay tsy ifaneraseranao intsony. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana dia manao...
Sivana sary tsara indrindra ampiasaina amin'ny marketing Instagram anao amin'ny 2022
Instagram dia tsy fampiharana fizarana sary tsotra toy ny taloha intsony. Ny lazany goavana eran'izao tontolo izao dia nahatonga azy ho lasa tsy manan-tsahala...
Vonona ny hiatrika ny voka-dratsy ve ianao?
TurboMedia dia vahaolana momba ny varotra haino aman-jery sosialy amin'ny kaonty Instagram momba ny orinasa sy manokana. Manampy ny mpanjifanay izahay hahazo mpanaraka, tiana, fomba fijery ary fanehoan-kevitra bebe kokoa hampitombo ny fiantraikany amin'ny Internet.
Copyright © 2022 TurboMedia (turbomedia.io). Zo rehetra voatokana. Sitemap
Ahoana ny fampiasana Instagram hanohanana ny antony ara-tsosialy
Ahoana no ahafahan'ny maha-influencer mifandray anao manampy anao hampitombo ny kaontinao Instagram
Mampiasa cookies ity tranonkala ity hahazoana antoka fa hahazo ny traikefa tsara indrindra amin'ny tranokalanay ianao